Hordhaca kulanka xiisaha iyo xamaasada leh Juventus Iyo Tottenham ee Champions League – Walaal24 Newss
Hordhaca kulanka xiisaha iyo xamaasada leh Juventus Iyo Tottenham ee Champions League
February 13, 2018	0	By walaal24
Marxaladaha wareega isreebreebka Champions League ayaa bilaaban doona caawo Talaadada h, iyadoo Juventus iyo Tottenham ay ku dagaalami doonaan Italy wareega 16ka lugta hore. Waa isku dhac labo kooxood oo leh qaabab kala duwan, iyadoo weerarka ugu fiican uu ku sii socdo mid ka mid ah daafacyada ugu fiican caalamka.
Waa kuwan sida aad u daawan kartid ciyaarta iyo saadaasheena:
Sida loo daawado
Daafaca Juventus difaaca, Harry Kane waxba ma dhicin, Old Lady ayaa lugtii labaad ku soo baxday iyadoo faa’iido ka heshay goolka Gonzalo Higuain.
labada dhinacba xuduudooda
Dhamaan wadahadalada ciyaarta ka hor ee ku saabsan tani waxay noqoneysaa imtixaanka ugu dambeeya ee Tottenham uu ku sheegay sheekada kaliyaha. Waxa ay sidoo kale xaqiijin kartaa tijaabada ugu dambeysa ee Juventus
Qeyb weyn oo ka mid ah sababtoo ah maahan kaliya magaca Juventus iyo sumcadda Juventus, ama soo dhaweynta ay soo dhaweynayaan waxay ka filan karaan Allianz Stadium habeenka Talaadada, laakiin qaab ciyaareedka haatan ee kooxda ka soo horjeeda. Tan iyo markii uu ku biiray khadka dhexe ee seddexda bisha November, kooxda Massimiliano Allegri ayaan wali laga badinin 16 kulan tartamada oo dhan. Intii lagu gudajiray, waxay haysteen 15 nadiif ah oo nadiif ah. Waxa ay xireen qaar ka mid ah weeraryahannada ugu weyn caalamka: Suarez iyo Messi, Mertens iyo Icardi. Xitaa Thor iyo cowskiisa ayaa laga yaabaa inay ku qanacsan yihiin inay ku guuleystaan ​​laad xor ah oo booska khatarta leh.
Qayb ka mid ah sababtii Juventus ay u ahayd mid adag oo la jebiyey waa inay sameeyaan qaabdhismeed abaabulan oo ku saabsan fowdo diineed. Ma ahan kuwa ugu caansan sida kooxo badan oo yurub ah, oo si fiican ugu faraxsan inay fadhiyaan 10 ama 11 xitaa kubada. Daafaca afaraad ee daafaca ka ciyaara, Mehdi Benatia iyo halyeeyga Giorgio Chiellini ayaa isbarbar dhigi doona kulan kasta. Dhamaantoodna waxa ay ka danbeeyaan 10ka sano ee soo socota, Gigi Buffon ayaa ku riyaaqaya xilli ciyaareed kale oo cajiib ah xirfad kale oo uu yaqaano wax yar.
Ma aha kaliya imtixaanka farsamada, ka dib, laakiin mid ka mid ah moodada. Dhibaatada Tottenham ayaa noqon doonta inay ku qasbaan arinta inay raadsadaan goolal qaali ah oo qaali ah. Hase yeeshee, waxay si buuxda uga warqabaan halista: inkastoo dhaawacyada Blaise Matuidi iyo Paulo Dybala ay dhabarjab ku yihiin Juventus, weli waxay heystaan ​​shaqaale difaac u noqon kara weerar xawaare cabsi leh. Sandro ayaa ka soo baxa daafaca bidix, mararka qaarkoodna garabka bidix, mararka qaar waa uu ku faafaa. Khedira iyo Pjanic waa gacmoon dukaameysan oo kubada dib u warshadeynaya. Xiddiga diirada dheer ee Mario Mandzukic ayaa mar walba ku jira. Waxa ay dhaliyeen goolal ka badan kuwa kale oo Serie A ah, waxaana ka duwan ciyaartoy badan oo isku dheelitiran, kuwaasoo si xoog leh ugu tiirsan hal ama labo gool, Juventus ayaa bixisa hanjabaad dhab ah oo ku aadan garoonka.
Sidaa daraadeed, Tottenham waxay raadineysaa inay ka ciyaarto lugta hore, dabcan waxay noqon doonaan. Laakiin sida Bernabeu Real Madrid, ama Wembley oo ay la ciyaarayaan Borussia Dortmund, waa inay diyaar u yihiin inay ciyaaraan kubad la’aan muddo dheer si ay u ilaaliyaan qaabkooda. Si kastaba ha ahaatee, farsamada ay ku shaqeyneyso, waa xaqiiqda ah in qaab ciyaareedka Pochettino uu ku soo bandhigayo Juventus isbuucyada soo socda sida ay u qaabili doonaan habeenka Arbacada. Miyuu ciyaari doonaa knopbly 3-5-2 oo uu ku isticmaalay Bernabeu? Caadi ahaan 4-2-3-1 ayaa lagu arkay inta badan ciyaaraha Premier League ee Tottenham. Miyuu xiran doonaa qadka dhexe? Laga yaabee in farqiga ugu weyn ee Spurs ee xilli ciyaareedkan iyo Spurs ee ugu dambeysay ay tahay sida Juventus, sidoo kale waxay sidoo kale dhaawici karaan dhinacyo kala duwan.
Kulamadoodii ugu dambeeyay ee ay ka horyimaadeen United, Liverpool iyo Arsenal waxa ay siin doonaan kalsooni ah inay jabiyaan kooxda ugu fiican. Harry Kane, waxay heystaan ​​mid ka mid ah weeraryahannada ugu da’da weyn caalamka, midkastaa uu bilaabmayo inuu mowjado ka sameeyo meelo ka baxsan xeebaha England. Chiellini ayaa ku tilmaamay “mid ka mid ah kuwa adduunka ugu xoog badan” shirkii jaraa’id ee isniinta ee isniinta, a
Isaga oo mararka qaarkood ka hor isaga, marmarna dhinaca – waxaad leedahay Son Heung-Min, mid ka mid ah weeraryahanada ugu fiican Premier League. Dele Alli, oo ka mid ah ciyaartoyda farsamada gacanta ugu badan leh ee England. Christian Eriksen, oo ah kubad sameeye oo soo saari kara baaskiil furaha filimka madow.
Sidaa darteed waxaa jira kooxo yar oo ka haray tartanka aad rabto in aad la kulanto wax ka yar Pochettino’s Spurs: waa koox qatar ah oo halis ah, inkastoo ay weli tahay tiro aan la garaneyn oo heerkan ah. Laga yaabee, ka dib, dhamaan wadahadalada horudhaca ah ee ku saabsan tani waxay noqoneysaa imtixaanka ugu dambeeya ee Tottenham ay u sheegeyso kaliya hal sheeko. Waxa ay sidoo kale xaqiijin kartaa tijaabada ugu dambeysa ee Juventus.
Kulanka hordhaca xiisaha badan Basel v Manchester City u dhaxeeya ee Champions League
Wasaarada Arimaha Diabada oo warsaxafadeed ka soo saartay darbiga Dowlada Kenya ay ka dhiseyso Balad-waaxo
Madaxweynaha Hir-shabeelle oo gaaray magaalada Kismaayo ee maamulka Jubaland
Guddoomiyaha Golaha Shacabka oo xafiiskiisa ku qaabilay Wakiilla Midowga Afrika ee Soomaaliya